Shirqoolkii oo soo shaac baxay By Mohamed Mousa « SAWNEWS NETWORK
« WAA MAXAY IFILADA DOOFAARKU SIDEE AYAYNA UGA DUWAN TAHAY IFILADA CAADIGA AH?
Agaasiamaha Ololaha Xisbiga UDUB Muadane Cismaan C/laahi Cigaal (Cismaan Hindi), oo Shir Jaraa’id Maanta Kaga Hadalay Heerka uu Marayo Ololaha Xisbigoodu. »
Shirqoolkii oo soo shaac baxay By Mohamed Mousa
Bishan August 15keedi waxaan dhegaystay shir-jaraa’id oo ay qabteen labada xisbi mucaarid. Shirkaa jaraaid wuxu i xasuusiyay saddex qoraal (The conspiracy behind the premeditated Murder, Conspiracy continued, iyo Shirqoolkii oo wada kale qaaday) oo aan ka qoray dilkii afarta nin ee reer Awdal iyo arimaha la doonaayey in ay dhacaan dilka dabadii.
Haddaba shirkaas jaraaid ee maanta ka dhacay Hargaysa ee ay wadajir u qabteen muccaridku wuxuu dhabaynayaa shirqoolkii aan ka sheekeeyey. Gaashaanbuurta nimanka u hadlay oo ah madaxda Kulmiye iyo UCID waxay ugu baaqaayaan dad ka mid ah ummada reer Somaliland dhoolatus iyo rabshado lagu carqaladeeyo madax banaandida Somaliland. Dadka shirkaasi ka hadlaayahy oo ah dadka hogaamiya xibiyada mucaaridka waa dad wata fikrado shisheeye. Nimankaasi ka hadlaayey lama odhan karo waa niman arima Somaliland danaynaaya. Hadalada xasiyada iyo kala qaybinta ku lafan ee ay ku hadlayeen waa arimo aan loo fadhiyin makra la eego marxalada maanta Somaliland marayso.
Shirqoolkii wuxuu gaadhay heerkii ugu sareeyey ee lagu fulin lahaa ujeedadda Inter-Peace. Ujeedadda Inter-Peace waxa weeyi in aanay suurtoobin xurnimada Somaliland waayo Inter-Peace waa qayb ka mid Jimciyadda Qaramadda Midoobay oo an ogolayn in Somaliland ka go’do Somalia. Tira kooba beenta ah wuxu ka mid yahay shirqoolada lagu burburinayo xurnimada Somaliland. Xidhiidhka ka dhaxeeya Inter-Peace iyo madaxda mucaaridka waa mid muddo soo taxneyd. Faisal waa nin reer Finland ah oo xidhiidh dheeraad ah la leh ninka hogaamiya Inter-Peace oo ahaan jiray Madaxweynaha wadankass. Shirkii ugu dambeeyey ee ka dhacay Nairobi ee ay ku kulmeen Siilaanyo, Waarabe, iyo Inter-Peace waxa la iswaydaarsaday in laga hortago in doorasho ka dhacdo Somaliland. Daqaalaha Inter-Peace wuxuu intiisa badan ka yimaadaa Jimciyada Qaramada Midoobay( UNDP,UNDEF,UNICEF,UN Peace building Fund) , inteeda kalana waxay ka timadaa Maraykanka, Australia, Belguim, Canada, Denmark, European Commision, Finland, France, Ireland, Japan, Netherlands, Norway, Portugal, Sweden, Switzerland, UK. Waxa daqaalaha Inter-Peace soo raaca in madaxda hogaamiya Inter-
Peace ay ka midyihiin dowladahaas. Madaxdaasi waxay kala yihiin: Chairman: Martti Ahtisari(Finaland), Anthony Travis(UK), Paddy Ashdown(UK), Thomas Greminger(Switzerland), Joao Honwana(United Nations Department of Political Affairs), Jan Pronk(Netherland), Matthias Stiefel(Switzeraland), Hisashi Owada(Japan). Intaas oo dhan waxay u ololeeyaan Somalia. Markaas ma dhici karto in Inter-Peace ay ku sheqayso arin anay ogolayn dowladahaasi. Waxa halkaas ka cad in qalabka iyo lacagta lagu deeqay Somaliland si loo sameeyo diiwaangelin ay tahay mid loogu talagalay in lagu babi’iyo Somaliland. Madaxda mucaaridku way ogyihiin shirqoolka ay wado Inter-Peace. Mucaaridku si u hirgeliyo ujeedada Inter-Peace iyo ta reer galbeedkaba waxay ku dhaqaaqeen in ay diidaan doorashada iyaga oo raacsan muranka Inter-Peace. Waxay markaas ku dhawaaqeen hanjabaad iyo digniin ay u jeedinayaan Madaxweyne Riyaale oo haduu ka noqon waqtiga doorashada ay ku khasbidoonaan in u is casilo. Waxay sheegeen in ay bilaabi doonaan banaanbaxyo ku lafan qas iyo kala qaybin. Salaasada bishu August tahay 18 waxay taageerayaashooda ka codsadeen in ay isku soo baxaan si ay u abuuraan kala jabka ummada Somaliland. Waxaas oo dhami wuxuu daba socdaa shirkii Inter-Peace iyo madaxda mucaaridku ku yeesheen Kenya.
Waxaa layaab leh in Faisal uu soo celiyo dacaayad lagu qori jiray jariidad la odhan jiray Dalka oo u qori jiray nin la yidhaahdo “ INA DHUXUL”. Wuxuu ku qori jiray in Wasaaraddii tacliinta oo loo geeyey Kuliyada Lafaoole ay la midatahy Qulujeed ( Wasaaradda Tacliinta + Kuliyada Lafoole = Qulujeed). Faisal Ali Waraabe oo la filaayey in u yahay siyaasi daneeya danta Somaliland wuxuu ku dhawaaqay islegtan: Madaxtooyada oo loo geeyey President Rayaale waxay la mid tahay Qulujeed ( Madaxtooyada + Rayaale = Qulujeed). Markii la waydiiyey in ay Qulujeed ka mid tahay Awdal wuxuu ku jawaabey Riyaale Awdal ma tegi karo ee Qulujeed ha tego.
Siilaanyo iyo Waraabe waxay fulinayaan arin ay ku soo heshiinyeen Inter-Peace. Inter-Peace waxay fulisaa sharciyadda u yaala reer galbeedka iyo Jimciyadda Qaramada Midoobay. Caawimada loo fidayey Somaliland si ay u samayso diiwaangelin ma ahayn mid la doonayey in ay fusho. Waxay ka mid tahay shirqoolada la rabo in la iskaga horkeeno ummada Somaliland oo markaas la yiraahdo ma degena.
Waxaa nasiib dara ah in ay Waraabe iyo Siilaanyo ilaaween in ay dowlada iyo nabada ay dhaliyeen odayadda ay ku tilmaameen jaahiliin ka soo bixiwaayey shaqadoodii ku saabsanayd dhexdhexaadinta qabaailka. Sagaal iyo toban sanadood ayaan ku waarnay nabad iyo xunkun ku dhisan dimoqraadiyad. Waxan Waydiinaya Waraabe iyo Siilaanyo ayaa u sobob ahaa in halkaa la soo gaadhno. Wuxu Waraabe ilowsan yahay in u Finaland uga yimiday nabada ay dhaliyeen odayada u jahliga ku tilmaamay. Siilaanyana sidoo kale u London uga yimiday. Waxay rabaan in madaxnimo iyo lacag ay ka waayeen wadanada ay ka kala yimaadeen iyaga oo adeegsanayaa Inter-Peace iyo illo kale.
Somaalidu waxay ku maahmaadaa Falaadhi gilgilasho kaagama go’do. Isku dirka iyo warxumo ka taliska madaxda mucaaridku waa mid iyaga iyo wixii taageera ku maqan oo lagula xisaabtami doono. Maahmaahda kalana waxay tidhi Markay Fooli timidaaba gudo qarsiimo hadhay. Markii xaalku ku xumaaday ee ay ka quusteen in ay doorasho xalaal ah ku soo baxaan ayay dan moodeen cay, shirqool, isku dir qabaail, kala qaybin iyo xamaasad been ah oo ay dadka ku kiciyaan. Waxay xal moodeen kala qaybi ku qadimayside.
Wax kale oo bishan August 16keedi an akhristay maqaal u qoray Mohamed Rashid oo dhexda kaga soo booday siyaasada cakiran ee mucaaridka. Mohamed Rashis wuxu ka mid ahaa ragii baabiyey ururkii SDA. Mohamed Rashiid wuxuu fuushan yahay doon caaryeysa oon lahayn badbaadayaal( Life boats ). Carabtu waxay ku mahmaahdaa damac uu ku dilaa. Mohamed wuxuu qoray sidan:
Today the population of Somaliland is divided into two main forces:
(2) Dark force who are undemocratic, ridden with clan self-centred reactionary ideology, selfishness and political and economical interests. These forces are preoccupied with the advancement of their economical interests and with retaining power, by all means, regardless the consequences of their actions.
Mohamed Rashiid waa nin tacliin sare leh oo loo baahnaa in u kala saaro saxa iyo qaladka. Wuxuu rabaa in qaladka qalad u ku saxo. Labada qodob ee ku qurani waa is waydaarsan yihiin. Mucaaridku wuxuu leeyahay qodobka laabad. Ka kowaad waxa is kale xisbiga dowlada haya ee UDUB. Mohamed Rashiid waa ragii loo baahnaa in uu dadka u caqli celiyo ee maaha kii isku dirka ummada iyo qabaailka ka shaqayn lahaa. Qofku marka u nolosha ku fishilmo doon kasta oo caaryeysa uu fuulaa. Mohamed Rashiid oo lagu tilmaamo in u ka mid yahay dad meel dheer wax arka wuxuu mudo dheer ahaa danayste u carara hunguri. Wuxuu saddexeeyaa Waraabe iyo Silaanyo oo iyguna nolol raadin ku jira iyaga oo aan danaynayn danta guud ee ummada Somaliland. Saddexduba waxay u baahan yihiin dabiib ku saabsan cilmi nafsi waayo qofka da’daas ah ee nolosho ka hortimaado wuxuu naftiisa iyo dadkaba u gaystaa dibaato aan la qiyaasi karin. Madaxda mucaaridka waxa haya cudur lagu tilmaamo xaga cilmi nafisiga hammi iyo qulub( hallucination and depression).
Waxa dadka reer Somaliland la gudboon in ay ka fiirsadaan ujeedooyinka xoogaga huwan maqaarka ee isku qarinaaya qiiqa ee idinku afuufaaya neeftii ugu dambaysay noloshooda. Xoogagaas oo waxay ka talinyaan in ummada reer Somaliland hal hal isku qabsadaan oo himiladeena xornimadoonku ku baaba’ado. Qofka bukaayi makala saari karo qalad iyo sax. Qofka ka buka caqliga, qablbiga, iyo maskaxdaba ma kala garan karo qalad iyo sax. Qofka ku fishilma nolosha qurbaha wuxuu miciin mooda nolosha dhulkiisa isaga oo isbidaaya nin waxgarashadiisu ka heersarayso ka ummada u ugu yimid wadanka, hase yeeshe dadka wadanka sii degenaa ayaa uga karasha roon siyaasada iyo nolosha dulka. Markaas dadka ay ka mid yihiin Waraabe, Rashiid, iyo siilaanyo waxay u baahan yihiin dabiib nafsi( rehabilitation).
Dadka reer Somaliland waxa la gudboon in ay tashadaan oo ay kala doortaan dimashada iyo dhiabaatada haysata walaalahooda Soomaliyeed iyo nabada an haysanay sagaal iyo tobankii sanadood ee ina soo dhaafay. Haddii aan ku hamiyeynay dowlnimo waxa dhicisaynaya Siilaanyo iyo Waraabe. Isku dirka iyo xamaasada ay dadka ka dhex wadaani waa mid khatar ku ah darisnimada qabaailka Somaliland iyo xurnimadooda. Waraabe in uu ku tilmaamo mudanayaasha Guuritda, parlamanka, iyo Suldaanada dad jaahiliin ah oo aan aqoon lahayn waa meel ka dhac wayn
Dadka reer Somalilandnow toosoo isku tiirsada waayo gacmo wadir jirbay wax ku gooyaan. Taas oon baan ku gaadhi karnaa wada noollaad nabadeed iyo go’itaan taam ah.
This entry was posted on August 17, 2009 at 10:39 am	and is filed under Articals. Tagged: Articals, Somaliland. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.